Ungaguquguqula kanjani izithombe ezijwayelekile kwi-3D - LucidPix
Ungaguquguqula kanjani izithombe ezijwayelekile kwi-3D
I-LucidPix ingenza okungaphezu kokungeza ama-Frames we-3D ezithombeni noma Capture Izithombe ze-3D, kungathatha nezithombe zakho ezijwayelekile ze-2D ezithathwe kunoma iyiphi ifoni noma ikhamera bese uziguqula zibe yi-3D nge-Injini yethu Ehamba Phambili ye-3D. Le nqubo esheshayo nelula isebenzisa ubuhlakani obusezingeni eliphakeme ukuhlaziya izithombe zakho futhi zizenze ziphile ngayo yonke le mikhakha emithathu.
Isinyathelo 1: Landa futhi Uqalise i-LucidPix
Uma ungakakwenzi lokho, into yokuqala okudingeka uyenze ukukwenza landa futhi ufake i-LucidPix. Uhlelo lokusebenza luyatholakala kuwo wonke amadivayisi we-Android ne-iPhone, futhi luzoqhubeka lusetshenziswe kunoma iyiphi i-smartphone, kusukela kuzingcingo ezintsha kakhulu ze-flagship nazo zonke izinsimbi kanye nezikhonkwane ziye kuma-smartphones wesilinganiso esihle kakhulu weminyaka kusuka eminyakeni eminingana emuva.
Isinyathelo 2: Khetha ukuguqulwa kwe-3D
Thepha isithonjana sekhamera ukufaka imodi yokuhlela bese uswayipha kwesobunxele kabili ukukhetha Ukuguqulwa kwe-3D. Lokhu kuzokwethula ngokuzenzakalelayo ukuthathwa kwesithombe kwefoni yakho, lapho uzokwazi ukuya khona kwesithombe ofuna ukusiguqula usuka kwesilinganayo esimbili uye kwisithombe sobukhulu abathathu. Uma usitholile isithombe sakho, thinta kuso ukuze usikhethe, bese uthinta Qalisa isithombe se-3D ukuvumela uLucidPix enze umlingo wawo.
Kulokhu, sithathe isithombe kusuka Pexels.com, indawo yethu esizoyikhangela esezingeni eliphezulu, izithombe zamahhala.
Isinyathelo 3: Yabelana ngendalo yakho
Manje njengoba usenze isithombe sakho se-2D sibe yiLucidPix 3D Photo, udinga ukusabelana ngezwe! Ungakwenza kalula lokhu ngokuthi usabe njengesithombe sendabuko se-Facebook 3D, noma ngokuthumela njengevidiyo enziwe nge-GIF noma ye-MP4. Mane uthephe inkinobho yokwabelana Ukukhetha isithombe sendabuko se-Facebook 3D, noma thepha Yabelana ngevidiyo ukusindisa ividiyo ye-MP4 ye-Snapchat, Instagram noma iTikTok, noma ungathinta ku-Dala i-GIF ukwenza i-GIF enezithombe zokwabelana nomaphi.
Isithombe se-3D se-LucidPix esiguqulwe sigcinwe njenge-GIF egqwayizayo
Ungaguquguqula Kanjani Ubuciko obuhle (Noma ubuciko bakho) ku-LucidPix →← Ungayenza kanjani i-3D Meme Nge-LucidPix